यसकारण पराजित भयो, राप्रपामा ‘मुसा प्रवृत्ति’ - Sadrishya
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङदेनको विजयको स्पष्ट सन्देश हो, नेपाली राजनीतिको बागडोर काँधमा बोकेर दौडन अब तलदेखि माथिसम्म युवा पुस्ता तयार भइसकेको छ । अर्थात, बुढो पुस्ताले अब आसन खालि गर्ने बेला भो ।
नेपाली कांग्रेसको केही दिनभित्रै आयोजना हुने चौधौं महाधिवेशन र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को पुस पहिलो साता हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागि हुने प्रतिनिधिमाथि राप्रपाको महाधिवेशनले मनोवैज्ञानिक प्रभाव अवश्य पार्नसक्छ ।
आखिर, पंचायतकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म सत्ता सयरमा खप्पीस राजनीतिका ‘भेटरान खेलाडि’ कमल थापालाई पराजित गरेर राजेन्द्र लिंगदेनले राजनीतिक नेतृत्वमा युवापुस्ताको ‘दमदार इन्ट्री’को उत्साहजनक ‘दुन्दुभी’ फुकेका छन् ।
आफुलाई लोकतान्त्रिक, बामपन्थी र क्रान्तिकारी दावी गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसदेखि एमाले र माओवादी केन्द्रसम्मका नेता कार्यकर्ताले प्रदर्शन गर्न नसकेको साहस राप्रपाका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले देखाएका छन् ।
सत्ता स्वार्थलाई मात्र केन्द्रमा राखेर राजावादीहरुको संवेदनालाई हरहमेसा भजाउन खोज्ने राप्रपाको वर्तमान थापा नेतृत्वविरुद्ध नयाँ पुस्ताले शसक्त ‘विद्रोह’ गरेको छ । दलहरुमा पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेको बेला यो एक धुवाँधार उदाहरण भएको छ ।
जे होस्, कमल थापालाई हराएर लिङदेनले अस्तित्व संकटमा रहेको राप्रपालाई ‘कोरामिन इन्जेक्सन’ दिएका छन् । लिङदेनको विजयलगत्तै राप्रपाको देशव्यापी संगठनमा नयाँ उर्जा, उत्साह र आशा देखिएको छ, जुन अन्य ठूला दलको युवा पुस्ताका लागि पनि सुखद खबर हो ।
पासोमा ‘मुसा प्रवृत्ति’
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं राप्रपाका पाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले यसपाली एक तीर दुइ निशाना दागेका छन् । एकातिर उनले राप्रपाभित्रको ‘मुसा प्रवृत्ति’लाई इतिहासको पासोमा पारेका छन् भने अर्कोतिर राजेन्द्र लिङदेनजस्ता जोशीला युवालाई पार्टीको बागडोर सुम्पिने तदारुकता र पहल गरेका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा जबजब मुसा प्रवृत्तिको चर्चा हुन्छ, तब कमल थापाको नाम आइहाल्छ । यो मुसा प्रवृत्ति विम्वका प्रथम प्रयोक्ता पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द नै हुन्, जसले यो महाधिवेशनमा लिङदेनलाई साथ दिए ।
सत्तासमीकरणको विकृती झाँगिएको नेपालको तात्कालीन राजनीति (२०५२ साल) मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई छाडेर नेता कमल थापालगायतले सूर्यबहादुर थापालाई सघाएका थिए । हो, त्यसैबेला चन्दले कमल थापाका हकमा मुसा प्रवृत्ति विम्ब प्रयोग गरेका थिए ।
चन्दले भनेका थिए, ‘मुसाले पहिला जहाजमा प्वाल पार्छ । जब जहाज पानीले भरिएर डुब्न थाल्छ, तब सबैभन्दा पहिला मुसाहरु नै जहाजबाट ज्यान जोगाउन भाग्ने गर्छन् । मुसो आज आफैं सवार जहाज काटेर अर्को जहाजमा पुगेको छ । त्यो मुसोले भोली फेरि नयाँ जहाज काटेर दुर्घटना गराउनेछ ।’
यसपाली आफुले समर्थन गरेका उम्मेदवार लिङदेनले तिनै ‘मुसा प्रवृत्ति’का थापालाई हराएका छन् । थापासँग चन्दको पुरानो हिसाब किताब पनि चुक्ता भएको छ । चन्दले थापेको ‘नयाँ पुस्ताको पासो’ले थापालाई उम्कन दिएन ।
‘पूर्व पंच’ लिग्यासीबाट मुक्ति
यो महाधिवेशनसँगै राप्रपाले एउटा ऐतिहासिक कांचुली फेरेको छ । पूर्व पंचको लिग्यासीबाट यसले करीब करीब मुक्ति पाएको छ । अब राप्रपालाई ‘पूर्व पंचहरुको पार्टी’ भन्नु उसमाथि अन्याय हुनेछ ।
पक्कै, २०४८ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा राप्रपा नामका दुइ अलग अलग पार्टी गठन भएपछि मिडियाहरुले ‘पूर्व पंचहरुको पार्टी’ विशेषण झुण्डयाउने गर्थे । हुन पनि चन्द र थापाले पूर्व पंचकै लिग्यासी बोकेका थिए ।
राप्रपामा पंचायतकालका प्रधानपंच, अंचलाधिश, राष्ट्रिय पंचायत सदस्य, गाउँफर्क सदस्य, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलगायत जिल्लाका पंचहरु मात्र संगठित थिए । त्यसैले प्रारम्भिक कालमा राप्रपाको निधारमा ‘पूर्व पंच’को एकखालको कलंक लाग्ने गरेको थियो ।
बितेका तिन दशकमा राप्रपामा त्यस्तो पुस्ताको उपस्थिति पनि शसक्त भइसकेको छ, जसले पंचायती व्यवस्था देख्दै देखेन । संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्र चाहने राप्रपाका अधिकांश नेता कार्यकर्तासँग पंचायतको गोरु बेचेको पनि साइनो छैन । उनीहरुलाई पंचायतको इतिहाससँग लेनादेना पनि छैन ।
तर, पंचायती पृष्ठभूमिका र अझ भनौं, पंचायतमा खाइखेली हुर्किएका केही नेताहरु नेतृत्वमा भएकाले राप्रपालाई ‘पूर्व पंच मण्डलेहरु’को पार्टी भन्ने आधार मिलेको थियो । अब त्यो आधार धेरै हदसम्म कम भएको छ ।
राप्रपाका संस्थापक सूर्यबहादुर थापा, बालाराम घर्ती मगर, जोगमेहर श्रेष्ठ, राजेश्वर देवकोटा आदि नेताहरुको निधन भइसकेको छ । बाँचेका लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि डा. प्रकाश चन्द्र लोहनीसम्मले नेतृत्वबाट करीब करीब सन्यास लिएका छन् । पशुपतिशमसेर राणाले पनि ‘पुग्यो मलाई’ भन्दै हात उठाएका छन् ।
पंचायती पृष्ठभूमिका र नेपाली राजनीतिमा चतुर अनि एक हदसम्म अवसरबादी छवी बनाएका कमल थापा पनि अब किनारा लागेकाले राप्रपा पंचायती इतिहासको कलंक मेटेर नयाँ रंग, रुप र रौनकका साथ अगाडि देखा परेको छ । राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा पंचायती लिग्यासीलाई छिचोल्दै नयाँ सोच, विचार र उत्साहको साथ पुनजार्गत राप्रपा अबका दिनमा अन्य दलका लागि चुनौतीका रुपमा खडा हुने पक्का छ ।
‘भाइरस’ र ‘अल्छी घोडा’ले हराए
लामो राजनीतिको अभ्यासबाट खारिएका भनिएका निवर्तनमान अध्यक्ष थापामा पछिल्ला दिनमा राजनीतिक संस्कार र सुझबुझको ठूलै खडेरी देखा परेको थियो, जसबाट उनी हार्दैछन् भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको थियो । थापाबाट चुनावअघि चार गल्ती भए, जसका कारण उनको हार सुनिश्चित भयो ।
१) अध्यक्ष बहाल रहँदा कमल थापाले अध्यक्षद्वय डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र लोकेन्द्रबहादुर चन्दविरुद्ध सामाजिक संजालमा जथाभावी आलोचना गर्न थाले । उनले डा. लोहनी र चन्दलाई ‘अल्छी घोडा’को संज्ञा दिए । लामो समयदेखि राप्रपालाई नेतृत्व दिएका पाका नेतामाथिको यस्तो असभ्य टिप्पणी पार्टीका धेरै नेता कार्यकर्तालाई पचेन । अध्यक्षजस्तो व्यक्तिबाट पार्टीलाई मिलाएर लैजानुपर्नेमा उल्टै गालीगलौज र मतभेद सिर्जना गर्दै त्यसलाई सार्वजनिक रुपमा छरपस्ट पार्ने हर्कत कसैलाई मन परेन । फलस्वरुप यसपाली चन्द र डा. लोहनीले अध्यक्ष थापालाई हराएरै छाडने निधो गर्दै देशव्यापी अभियान चलाए ।
२) अध्यक्ष थापाले राजवादीहरुको भावनालाई संबोधन गर्न सकेनन् । सडकमा विभिन्न संघसंस्थाहरुले राजतन्त्र फर्काउने नारा दिएर विशाल प्रदर्शन गरिरहँदा अध्यक्ष थापाले त्यो जनमतलाई राप्रपाको छाताभित्र गोलबन्द गर्नेतर्फ कुनै चातुर्य र शक्रियता देखाएनन् । बरु, राजावादी मत सडकमा उर्लिएको बेला थापा भने तात्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुने दाउ हेरीरहेका थिए । अर्थात बदनाम र अलोकप्रिय भइसकेको कम्युनिष्ट सरकारमा सहभागि भएर थापा राप्रपालाई पनि अलोकप्रिय बनाउने ताकमा थिए, तर अध्यक्षद्वयको हस्तक्षेपका कारण यसमा उनी सफल भएका थिएनन् ।
३) अध्यक्ष थापाले आफ्नो विरोधमा आवाज उठाउनेहरुलाई ‘भाइरस’को संज्ञा दिए । लोकतन्त्रमा दलभित्र विचारको विमती राख्न पाइन्छ । मतभेदहरु हुन्छन् । विरोधी मतको पनि कदर गर्दै अध्यक्षले सुझबुझ देखाउनुपर्नेमा उल्टै सामाजिक संजालमा ‘भाइरस’ लेख्दै तुच्छ टिप्पणी गर्दा उल्टै प्रत्यूत्पादक भयो ।
४) महाधिवेशन प्रारम्भ भइसकेपछि पनि अध्यक्ष थापाबाट बच्काना हर्कतहरु भइरहे । लिङदेन पक्षबाट महिलातर्फको महामंत्रीमा खडा भएकी नायिका रेखा थापाको विरुद्ध थापा पक्षले नचाहिने हल्ला चलाउन थाल्यो । केही वर्षअहि माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नाचेको, गणतन्त्रको पक्षमा बोलेको आदि प्रसँग उठाएर नायिका रेखाको विरुद्ध ‘गणतन्त्रबादी रेखा थापालाई बहिस्कार गरौं’ भन्ने पर्चासमेत थापाका निजी सचिवहरुले सामाजिक संजालमा फैलाए ।
कहाँसम्म भने अध्यक्ष थापा स्वयंले रेखा थापाले गणतन्त्रको पक्षमा बोलेको भिडियो फेसबुकमा सार्वजनिक गर्र्दै ‘हा हा हा’ मात्र लेखे । रेखा थापाले कुनैबेला गणतन्त्रको पक्षमा बोलेकी हुनसक्छीन्, तर जब उनी राप्रपाको सदस्य छिन् भने उनले पक्कै राप्रपाको नीति र सिद्धान्त नै मान्ने होला । यति सामान्य कुरा स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि रेखालाई हराउन यो हदसम्मको निकृष्ट हर्कतमा उत्रिएका थापा तिनै हुन्, जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने बर्तमान संविधानलाई ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ भन्दै विदेशी सामु भाषण ठोकेका थिए ।
अरुलाई गणतन्त्रबादी र आफु मात्र सच्चा राजतन्त्रवादी जताउन खोज्ने अध्यक्ष थापाको दाउपेच यसपाली चलेन । राप्रपाका हरेक नेता कार्यकर्ताले देखेकै थिए, निकट अतितमा यीनै थापा गणतन्त्रात्मक संविधान जारी हुनासाथ उप्रधानमन्त्री खान हतारिएको । आफ्ना अडान छाडेर राप्रपालाई सदा सत्ताकै मोलमोलाईको अखाडामा परिणत गरेकै कारण यसपाली पार्टीका अधिकांश कार्यकर्ताले ‘मुसा र अवसरवादी प्रवृत्ति’लाई झापड दिएका हुन् ।
पूर्व राजाको ‘ग्रिन सिग्नल’
जुझारु युवा नेता लिङदेनलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि आशिर्वाद रह्यो । राजावादीको भावना भडकाएर कमल थापाले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरेको, सत्ताकै खेल खेलेको गुनासो पूर्व राजाबाट हूँदै आएको थियो । यसैकारण राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा अन्य संस्थाको गतिविधिमाथि बरु पूर्व राजालाई विश्वास थियो, तर कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा चाहिँ ‘राजतन्त्रबादी दल’ हो कि हैन भन्नेमा पूर्व राजासमेत अन्यौलमा थिए ।
यसो हुनुमा अध्यक्ष थापाको ‘दोगला चरीत्र’ नै काम गरेको थियो । सत्तामा जान पाए गणतन्त्रको बखान गर्ने, सत्तामा नहुँदा चाहिँ हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको नारा दिने द्वैध रवैया थापामा देखिएपछि पूर्व राजा शाहले भरपर्दो, जोशिलो र जनता र कार्यकर्ताको मन जित्नसक्ने पात्रको खोजी गरिरहेका थिए, जुन उनले लिङदेनमा देखे । पूर्व राजाले लिङदेनको पक्षमा लबिङ गर्न विभिन्न च्यानलबाट आफ्नो सन्देश पठाएका थिए ।
चुनावमा हारेपछि थापा पक्षका अधिकांश नेताहरु आफुहरुलाई पूर्व राजाले अलपत्र पारेको बताउन थालेका छन् । आलाकाँचा मानिसहरु नेतृत्वमा आएकाले राप्रपाको पुरानो साख नरहने उनीहरुको दाबी छ । तर, पूर्व राजा शाहमा राप्रपाको नयाँ नेतृत्वले नै देशव्यापी रुपमा राजतन्त्रको पक्षमा माहौल खडा गर्नसक्ने विश्वास हुनसक्छ । राजतन्त्र फर्काउन अहिले तत्काल संभव नभए पनि कम्तीमा आगामी चुनावमा राजावादी शक्तिलाई दरिलो स्थानमा जिताएर माहौल खडा गर्ने पूर्व राजाको तयारी छ ।
हुन पनि, बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु एकैपल्ट भए झैं राप्रपामा राजेन्द्र लिङदेनको विजय भइरहँदा शनिवार यीनै लिङदेनलाई झापामा चुनाव जिताउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजावादी पूर्व मन्त्री भद्रकुमारी घलेसँग उनकै घरमा गएर भलाकुसारी गरेका छन् । पूर्व मन्त्री घलेले ओलीलाई ‘दुइ तिहाइ ल्याउन’ आशिर्वाद दिएकी छिन् ।
राजावादीलाई रिझाउने अभियानमा लागेका ओलीको एमाले र राजेन्द्र लिङदेनको राप्रपाविच झापामा मात्र हैन, देशव्यापी चुनावी तालमेलको संभावना भने अब बढेर गएको छ । यही कारण शनिवार नै माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘एमाले अब मण्डलेहरुको मोर्चा हुने’ बताइसकेका छन् ।